Myanmar Rohingya two-child rule ‘discrimination’: Suu Kyi
Mali under Sharia Law
Another Indian dies in custody, this time in Penang
‘It is okay to cheat as long as’ seems to be the national standard
Woolwich attackers' university hosted 'extremist' preachers likes of Dr. Khalid Fikry, Zahir Mahmoud and Abu Usamah.
My pic and short status message at 2nd. Std. in Kingswood School Kalaw, 53 years ago
မိတ်ဆွေနည်း ကံမွဲလှတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်
BBC News - Sri Lanka Buddhist monk dies after self-immolation
Building A Disabled-Friendly Petaling Jaya
Posted: 27 May 2013 10:21 AM PDT
Posted: 27 May 2013 07:14 AM PDT
Wife on hearing replies, It also means 'With Idiot For Ever'.
Her husband had been slipping in and out foracoma for several months yet she stayed by his bedside every single day.
Every girls treats her boyfriend as "GOD".
Later on, some how the alphabets get reversed !
A drunk man arrives late at home…. He knows his wife won't open the door, so he decides to pretend that he bought her flowers and knocks the door…
Drunk Husband: I bring flowers for the pretty lady…
Wife opens the door and says… Where are the flowers…
Drunk Husband: Where is the pretty lady ?
On the way out the door, he answered his wife's "what time will you be home?" question with "probably about 1:30, I'll have lunch at the club." 1:30 came and went, 3:00 passed, 6:15, still not home.
Finally at about 11:45p.m. he rolls in the driveway, leaves his clubs in the garage, and presents his wife withapizza, and begins the apologetic story.
We finished our game about 11:30, had lunch, and I started home, when along side the road I saw this attractive girl withaflat tire on her car.
Before I knew it, we were in the motel next door having s*x.
And that is why I am so late getting home.
His wife looked him in the eye and said, "Don't bullshit me, you played 36 holes, didn't you?"
Posted: 27 May 2013 07:44 AM PDT
"Jutaan rakyat akan memenuhi Kuala Lumpur jika tuntutan kita tidak ditunaikan tidak lama lagi," kata Mohamad dalam perhimpunan #Black505 di sini malam tadi.
"Jika SPR tidak letak jawatan, kita akan terus mengadakan perhimpunan sehingga kerajaan Najib gugur," tambah beliau lagi.
"Kita kena ingat, rakyat memilih pilihan raya, rakyat memilih jalan demokrasi. Kenapa rakyat memilih jalan raya di Tunisia? Mesir? Jakarta?
"Kerana mereka sudah tidak yakin dengan jalan demokrasi," katanya disambut dengan sorakan daripada ribuan hadirin berpakaian hitam.
"Polis dan tentera saya ingatkan. Jaga keselamatan rakyat, jika gugur sebutir peluru kepada rakyat yang tidak bersenjata, bererti kamu sudah kalah.
"Jangan usik rakyat yang memilih cara demokrasi ini," katanya.
"Kita tidak akan bekerjasama atau bekerja atau melibatkan diri dengan Suruhanjaya Pilihan Raya yang menipu," kata ketua umum PKR dan menambah "kata dua" akan dikeluarkan jika mereka tidak meletak jawatan. -TMI
"Jika Wan Ahmad membisu, jika Aziz membeku, jika SPR buat pekak badak, rakyat akan menuju ke Dataran Merdeka," kata beliau dan disambut teriakkan bersemangat lebih 50,000 perserta perhimpunan tersebut.
"Cukup setakat ini dahulu, dan Insya-Allah kita akan bertemu di Dataran Merdeka selepas ini sehinggalah tuntutan-tuntutan kita dipenuhi oleh (Perdana Menteri Datuk Seri) Najib (Razak) dan SPR," ujar beliau.
Posted: 27 May 2013 04:52 AM PDT
Posted: 27 May 2013 04:48 AM PDT
Myanmar Rohingya two-child rule 'discrimination': Suu Kyi May 27, 2013 -
YANGON: Myanmar's Aung San Suu Kyi Monday criticisedaban on Rohingya having more than two children in strife-torn Rakhine state as counter to human rights, in rare comments on the plight of the Muslim group.
Up to 140,000 people — mainly Rohingya Muslims — were displaced in two waves of sectarian unrest between Buddhists and Muslims in Rakhine last year.
It described the population policy as "abhorrent, inhumane" and "completely contrary to human rights". An official commission's report in April into the unrest suggested voluntary family planning to stemahigh birthrate among the Rohingya that it said stoked tensions.
Local authorities have previously been accused of trying to restrict birthrates among the Rohingya by refusing to acknowledge any more than two children per married couple — thereby denying them legal rights and access to services.
Posted: 27 May 2013 04:38 AM PDT
When the jihadist group MUJAO took control of northern Mali's city of Gao from Tuareg rebels last September, many locals welcomed the return of law and order. But the security MUJAO offered came ataprice:aharsh interpretation of Islamic law that saw public beatings, whippings, and even amputations in the city's main square.
Posted: 27 May 2013 04:37 AM PDT
Suspected drug addict found dead in police custody By KOW KWAN YEE
GEORGE TOWN: A 40-year-old suspected drug addict was found dead while in police custody, just 19 hours after he was detained at the state police headquarters lock-up here. Penang deputy CID chief Asst Comm Mohd Nasir Salleh said R. Jamesh Ramesh was found unconscious whenapoliceman tried to wake him up at around 10.30am yesterday as they wanted to him take him to court foraremand order. "The policeman alerted the Penang Hospital immediately but at 11.15am the suspect was certified dead by the medical officers," he said.
ACP Mohd Nasir said police had ruled out foul play in the case as initial investigations showed no bruises or injuries on the suspect. "The body has been sent to the mortuary for post-mortem," he toldapress conference at the north-east district police headquarters in Patani Road here yesterday. He said Jamesh Ramesh was arrested for taking drugs by the Narcotic Department's policemen atacommunity hall in Patani Road at 12.45pm on Saturday.
"The suspect was sent to the lock-up at around 4pm that day after his urine test was found to be positive for morphine. "He was seen to be in normal condition by other detainees at the cell the same night," he said. Asked why the police conducted the press conference just hours after Jamesh Ramesh's death, ACP Mohd Nasir explained this was to prevent others from "spinning" the matter. "We want to be transparent by revealing the information to the media before some parties manipulate this matter," he said, adding that the suspect's family members had been informed of his death.
Posted: 27 May 2013 04:34 AM PDT
The GE-13 is fraudulent and suspect. Anything else is all mere cosmetic. But we still lack the honor and the steel to admit. Shame has lost it meaning; honor has taken flight from the window of the nation's soul.
On the one hand the Prime Minister from the minority votes polled, states that all the claims and allegations of irregularities observed in the GE-13 are unfounded. He lambasts the opposition political party of causing havoc in the country. Then comes the Election Commission, reporting that it is going to clean up the electoral system in preparation for the next General Election.
What exactly do all these people and so-called leaders think of the rakyat? And Malaysians must then really be fools to have to put up with such bunkum We had 56 years after independence. In the past forty years how many times did we have the Constitution amended under the Mahathir regime? We could amend and amend till even our revered royalties were stripped and silenced away. But only now we have the EC declaring - after the thirteen general elections, mind you, that it will clean up the electoral system.
The Constitution was raped to suit the pleasures of the BN government. That explains why today we can form the government with minority votes polled and yet end up garnering maximum seats win. The people gave the EC and the Mahathiristic governmentagood solid four years plus (since the conclusion of the twelfth GE) to clean up the undemocratic elements within the electoral system. We gave the Bersih 1.0 and 2.0 and 3.0 as peaceful signals that democracy must be restored at all cost in the best interest of this nation, the region and for the world intentions.
In return we got the baton, the stinging water canons andapainful label of being anti-nationalists. The opposition pact leaders were run down like rats in the gutter. The activists were harassed and humiliated without dignity. Is there no one within the line-up of 2013 post-GE-13 leaders, MPs, Cabinet Members, Senators who can stand up and restore the dignity, honor and nation-loyalty in their minority-vote winning political party?
If all these people are incapable or adamant in not wanting to allow logic and principles to prevail supreme and above their vested power-interests, then let the following questions haunt their conscience till eternity: If the GE-13 is untainted, why must you now say that the electoral system will be cleaned up and brought to standard? Why did the EC not respond with affirmative attention before the 13th general elections? And why did the EC deny and defy all the calls for clean, fair and democratic elections?
Why is the EC seeingasudden need to address the electoral system now even when the PM blatantly denies that all the allegations of irregularities are not true? And if it is true that you did not win the GE-13 by means that mocks the very foundations of democracy, why did the US government demand for clarifications on the just concluded GE-13?
Let truth be told. The fourth stone that has already broken the camel's back in Malaysia's political structure is the fact that here isanation whereapolitical party can lose in the votes polled and yet secure more seats to formagovernment. This betrays the very essence and shatters the cornerstone of democracy that is honored all across the globe.
Any effort and all the promises to make good the electoral system in preparation for the next general election is not the issue here. The battle is on GE-13. We cannot proclaim to haveademocratic government when the means to forming that government is spun on threads of undemocratic principles.
Which isasin against this nation – crying out for democracy, legitimacy and honor or shielding fraud and ill intentions in order to retain power and control?
This exposes both the depravity of using journalists as human shields, and of journalists allowing themselves to be used in suchaway.
It was reported today that the university of the attackers that killed Drummer Lee Rigby in Woolwich this week played host toanumber of extremist speakers on campus over the past decade. Greenwich University, which both Michael Adebolajo and Michael Adebowale attended, recently hosted the likes of Dr. Khalid Fikry, Zahir Mahmoud and Abu Usamah.
Posted: 27 May 2013 05:05 AM PDT
Posted: 27 May 2013 02:48 AM PDT
"Solvents are used to dissolve the ink on newspapers. These solvents could be carcinogenic.
"Consuming food which is mixed with these chemicals puts people at risk of getting serious chronic illnesses," he said.
"Local councils should make itarequirement that all hawkers be prohibited from such practices before granting them an operating licence," he said.
Mohd Idris said this move would help hawkers practise good hygiene and be more mindful of their customers' health.
"You may never know if the plastic sheets have holes in them. The food may still be contaminated with the ink on the newspaper and other chemicals," he said.
"When I told the hawker that it was an unhealthy practice, she merely glared at me. Needless to say, I'm not going to buy anything from her anymore," said Remy from Ipoh.
Posted: 27 May 2013 01:57 AM PDT
"Kalaulah2daripada 8 petisyen yang dibuat itu menyebelahi kita (Pakatan Rakyat), ianya sudah cukup untuk menumbangkan BN seterusnya Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan di Perak.
"Justeru teruskanlah kita ikhtiar dan meminta pertolongan Allah agar diberi keputusan positif kepada Pakatan Rakyat," jelasnya.
My pic and short status message at 2nd. Std. in Kingswood School Kalaw, SSS, Burma. That was in about 1959-60.
I was ill with fracture of lower end of left arm bone ( Supracondylar fracture of humerus bone)…complications and handicapped for few years in Std. 2.. Even my teacher cried for me. I missed school for few months, need to go and trat in Mandalay. At last improvedalot with traditional Burmese Baleba near Malon football field. Actuallyalot of heat fermentation and Physiotherapy. My left hand was stiff from elbow downwards. I had seen bone specialist (Orthopedic Surgeon) who just wish to operate and could not guarantee recovery…Root cause was tight POP, usual complication of POP.
Posted: 26 May 2013 10:55 PM PDT
Posted: 26 May 2013 08:47 PM PDT
FB of U Aung Tin:မိတ်ဆွေနည်း ကံမွဲလှတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကပြားမဖြစ်၊ သွေးမစပ်တဲ့လူမျိုး မရှိဘူးလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကတည်းက UNESCOက ကြေငြာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ အခုထက်ထိ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်၊ မွန်လူမျိုးစစ်စစ်၊ ရခိုင်လူမျိုးစစ်စစ်လို့ ဂုဏ်ယူလို့ ကောင်းနေတုန်းပါဘဲ။
မြန်မာပြည်မှာရောက်နေကြတဲ့ ကပြားချင်းအတူတူ အရင်ရောက်တဲ့ကပြားက တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်၊ နောက်ရောက်တဲ့ ကပြားလည်း မွတ်စလင်မဟုတ်ရင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်၊ မြန်မာမွတ်စလင်(ပသီ)လူမျိုးအပါအဝင် မြေဒူး၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ၃၇၀၀၊ ပသျှူး(မလေး)တွေကတော့ မွတ်စလင်တွေဖြစ်တာနဲ့ ရှိပြီးသား တိုင်းရင်းသားစာရင်းကနေ အရှင်လတ်လတ် အပယ်ခံနေရတယ်။ မွတ်စလင်ဖြစ်ရင် ၁၈၂၄ခုနှစ် မတိုင်မီက နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သက်သေထူခိုင်းတယ်။ တစ်ဖအေ၊ တစ်မအေက မွေးချင်းအရင်းတောင် အကိုဖြစ်သူက မွတ်စလင်ဖြစ်ရင် ဘင်္ဂါလီနွယ်ဖွား နိုင်ငံသားပြုဖြစ်သွားတယ်။ ညီဖြစ်သူက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင် ဘာမှသက်သေ ထူစရာမလိုတော့ဘူး။ အလိုအလျောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ် ဖြစ်သွားကော။ ရုပ်ရှင်မင်းသား မောင်မောင်တာရဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်မျိုးတွေက တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည့်နေပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောတဲ့ နိုင်ငံသား ဥပဒေဆိုတာ ဒါလားဗျာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ တရုပ်ကပြားတွေကျတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကြီးတင်မက ဖအေ၊ မအေ တရုပ်အစစ်၊ ဗိုလ်နေဝင်းက ကနောင်မင်းဆက်တောင် ဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာတောင် ရိုးရိုးမြန်မာ မဟုတ်ဘူး။ ရှိခိုးခံရတဲ့ မြန်မာနော်။ တရုပ်နာမည် ရှုမောင်ကလည်း ရှုမဝတဲ့သားလေး မြန်မာ ရှုမောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးလို တတ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ လူတွေပါ။ ကျောင်းတက်သည်အထိ မြန်မာနာမည်တောင် မရှိပါဘူးလို့ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့ တရုပ်ဗိုလ်အောင်ကြီးလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ် ဖြစ်သွားကော။ မြန်မာဖြစ်သွားတဲ့ တရုပ်တွေ၊ တရုပ်ကပြားတွေက ဝန်ကြီးတွေလည်း ဖြစ်လို့ရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလည်း ဖြစ်လို့ရတယ်။ နောင်လည်းဖြစ်အုံးမှာတွေ အများကြီးဘဲ။ တရုပ်မျက်လုံးနဲ့ ကုလားအသားအရေရှိတဲ့ ဦးခင်ရီသာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရင် သူ့အဆက်အနွယ်တွေဟာ ၁၈၂၄ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဘယ်လိုသက်သေပြမလဲ။ ဦးအစ်စမိုင်ကမွေးတဲ့ ဦးသိန်းညွန့်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ မြန်မာဖြစ်၊ အမတ်ဖြစ်ပေါ့။ မွတ်စလင်ကမွေးတဲ့ ဘကြီးဘဖေတို့၊ ဦးသန့်တို့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား စစ်စစ်တွေပေ့ါ။ အဲ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ပြောင်းလဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင် ဖအေ၊ မအေ မြန်မာဖြစ်နေလျှက်နဲ့ ဘင်္ဂါလီသွေးရောလို့ ရေးထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတာကို အထောက်အထားနဲ့ ပြမယ်ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင် ဘာပြောချင်ပါသလဲ။ သဘောကျသည်ဖြစ်စေ၊ မကျသည်ဖြစ်စေ သုံးနေရအုံးမယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က ဆိုလိုက်တဲ့ နိုင်ငံသား ဥပဒေဆိုတာ ဒါလားဗျာ။
၁၉၄၆ခု ဇန္နဝါရီလ (၁၇)က (၂၃)ရက်အထိ ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ ဖဆပလညီလာခံမှာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၅)ဖွဲ့ တက်ရောက်ပြီး မြန်မာမွတ်စလင်ကြီး ဦးဖေခင်တင်သွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်(၇)ကြောင့် ပြည်ထောင်စုဆိုတာ ပေါ်ခဲ့ရတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်(၇)ဟာ ပင်လုံရဲ့ မိခင်ဖြစ်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်(၇) မရှိရင် ပင်လုံ မရှိဘူး။ ပင်လုံမရှိရင် ပြည်ထောင်စုဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတင်သွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်(၆)အရ ကပြားမြန်မာ-မွတ်စလင်တွေကို ဗမာမွတ်စလင်(မြန်မာမွတ်စလင်)လူမျိုးရယ်လို့ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ပြီး လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးပေးကြောင်း ချမှတ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ထောင်ကျော် သမိုင်းကို ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ထင်ပါသလား။
ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ ပထမဆုံးကြေငြာချက်(၁၉၃၀)မှာ "အို ဗမာမွတ်စလင် အပေါင်းတို့ သင်တို့သည် ဗမာများပင် မဟုတ်လော" လို့ဆိုပြီး လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဗမာမွတ်စလင်တွေ အများအပြား သခင်ဘွဲ့ခံကြရုံတင်မက ဒိုဗမာမွတ်စလင် အစည်းအရုံးဆိုပြီး ထပ်အားဖြည့်လိုက်ကြသေးတယ်။ ဒီသမိုင်းကော ဘယ်နားထားမလဲ ကိုမင်းကိုနိုင်။
၂၀၁၂ခု စက်တင်္ဘာ(၉)ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ အိဒ်ပွဲတော်မှာ ဦးတင်ဦး(NLD နာယကကြီး)က (၁) မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ (၂) မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရင်ဘောင်တန်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို ပြောခဲ့သလဲဆိုတာကို အသက်ထင်ရှား ရှိနေသေးတဲ့ ဦးတင်ဦးကို မေးကြည့်ပါလား ကိုမင်းကိုနိုင်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပင်လုံစာချုပ် မချုပ်ဆိုမီ ဖေဖေါ်ဝါရီ(၁၁)၊ ၁၉၄ရမှာ "အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စွဲပြီး ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်လို့ မရဘူးဆိုပြီး တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း မိန့်ကြားခဲ့တယ်။ ဒီသမိုင်းကိုကော ဘယ်လိုသဘောရသလဲ ကိုမင်းကိုနိုင်။
၁၉၄၇ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်အမတ်များ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲစဉ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာပြုလုပ်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးရာမှာလည်း "တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းက လွတ်မြောက်အောင် တိုက်ကြစဉ်က ကျနော်တို့ချည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့(ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ)လည်း ပါတယ်။ အခုကျွန်တွင်းကတောင် လွတ်မယ်မှ မကြံကြသေးဘူး။ သူတို့တွေပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး ငါတို့လူများစုဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်လိုက်ကြရင်" ဆိုပြီး တားမြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ အမြင်ကို သိချင်ပါတယ်။
ခိုးဝင်လာသူမှန်သမျှ မောင်းထုတ်ရမှာပါ ကိုမင်းကိုနိုင်။ ဘင်္ဂါလီလည်း ခိုးဝင်လာရင် မောင်းထုတ်ပါ။ သို့သော် ဘင်္ဂလားဒက်က ရခိုင်တွေ မြန်မာပြည်ထဲ အချိန်မရွေး တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိဝင်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနှင့်နယ်စပ်ချင်း ထိနေတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးမှာ နှစ်ဖက်ခွနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေက သန်းရာကျော် အနည်းဆုံးရှိပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာပြည်ဖက်ကို ရခိုင်တွေလိုဘဲ ကူးလာမယ်ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင် လက်ခံနိုင်ပါသလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ရခိုင်အတွက် သတ်သတ်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် သတ်သတ် နှစ်မျိုးထားသင့်သလား ကိုမင်းကိုနိုင်။
၁၉၄၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူ မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို ၁၉၇၄အရဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအရဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၂၀၀၈အရဘဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသားအဖြစ်က ပြန်ပယ်ဖျက်ဖို့ အစိုးရလုပ်သူတွေတင်မက ဒီမိုကရေစီနည်းအရဆိုပြီး လူများစုသဘောအရပင် လုပ်လို့ ရနိုင်တယ်၊ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်ထင်ပါသလား။
နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပြီးတဲ့ ရခိုင်ပြည်က မွတ်စလင်တွေကို ဘင်္ဂါလီဆိုပြီး မောင်းထုတ်သင့်သလား ကိုမင်းကိုနိုင်။ သူတို့ကို အခြားနိုင်ငံသားတွေလို တန်းတူဆက်ဆံဖို့၊ ကာကွယ်ပေးဖို့ လိုမယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ယူဆပါသလား။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတို့ကို ရခိုင်အစွန်းရောက် လူ၊ ဘုန်းကြီး၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေက အစည်းအဝေးတွေ ထိုင်၊ စာရွက်စာတန်းတွေ ထုတ်ပြီး အခုထက်တိုင် လူသားမဆန်စွာ အစာရေစာ ဖြတ်၊ ဆေးဝါး ဖြတ်၊ အဆက်အဆံ ဖြတ်၊ အလုပ်အကိုင် အရောင်းအဝယ် ဖြတ်နေတာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့ပါမယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ရှစ်လေးလုံးအဖွဲ့က ဒီလိုမလုပ်သင့် မလုပ်အပ်ဘူးဆိုပြီး ဘာဖြစ်လို့ မကန့်ကွက်ကြဘဲ ယနေ့တိုင် မသိချင်ယောင်ဆောင် နှုတ်ပိတ်ရေငုံနေရတာလဲ ကိုမင်းကိုနိုင်။ သူတို့တွေ အများအပြားဟာ မိုးထဲရေထဲမှာ တိရစ္ဆာန်ထက်တောင် ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ ရောဂါတွေ၊ အဟာရချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ခလေးသူငယ်တွေ နေ့စဉ်သေနေကြရတယ်။ သူတို့အတွက် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ စာနာစကားကို ကြားချင်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်က "ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ၁၃၅-မျိုးသော ဘာသာစကားကို တစ်ခုမှမတတ်ပဲနဲ့၊ သူ့ဘာသာသူပြောနေတဲ့၊ သူ့ဘာသာတစ်ခုပဲတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။" ရိုဟင်ဂျာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒိုင်းနက်က တိုင်းရင်းသား(၁၃၅)မျိုး စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ကိုမင်းကိုနိုင်။ ဒိုင်းနက်တွေပြောတဲ့စကားနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေပြောတဲ့စကား ၁၀၀% တူတယ်ဆိုတာ ကိုမင်းကိုနိုင် သိပါသလား။
ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် လက်မခံနိုင်တာပါလို့ သတ္တိရှိရှိ ပြောရင် ပြောကြပါ။ ဒါဆို အဖြေရအောင် ဆွေးနွေးလို့ရနိုင်တယ်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်းကို အစိုးရထုတ်စာစောင်တွေ၊ သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေ၊ စွယ်စုံကျမ်းတွေ၊ မြန်မာ့အသံက ရိုဟင်ဂျာ အသံလွှင့်ချက်တွေစတဲ့ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေ အခိုင်အမာရှိလျှက်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာဟာ ဘယ်တုန်းကမှ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု မခံခဲ့ရပါဘူးဆိုပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဘာဖြစ်လို့ ဗြောင်လိမ်နေကြတာလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ် ကိုမင်းကိုနိုင်။ ကိုမင်းကိုနိုင် အမြင်ကို သိပါရစေလား။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကိုမင်းကိုနိုင်က မေလ(၂၅)ရက် နယူးယော့မှာ "အဲဒီလောလောဆယ်မှာတော့နိုင်ငံသားဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်/မဖြစ်..။ ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက နေထိုင်လာပြီးတော့ နိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲရဲတင်းတင်း အာမခံပါတယ်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို အပြည့်ရသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရပ်တည်ပေးမယ်။ သူ့အခွင့်အရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ်။" ဆိုလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာ ၉၉.၉၉၉၉၉%က ဘယ်နိုင်ငံကမှ ခိုးဝင်လာသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ ချစ်စရာ၊ ကာကွယ်စရာ၊ သေစရာ နိုင်ငံရှိသူတွေ မဟုတ်ကြဘူး။ ဘိုး ဘွား စဉ်ဆက်နေထိုင်ကြသူ တိုင်းရင်းသားတွေချည်းပါ။
သို့သော် ကိုမင်းကိုနိုင်က တစ်ဆက်တည်း ဆက်ပြောလိုက်တဲ့ "သို့သော်….အဲဒီ သို့သော်ရဲ့ နောက်မှာ ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အချက်ရှိပါတယ်။ "အခွင့်အရေးလိုချင်ရင်၊ တာဝန်ယူမှုရှိရမယ်။ "ဘယ်ကိစ္စမျိုး မဆိုပါ။" ပြောကြားချက်ကိုတော့ သစ္စာစကားဆိုရရင် သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို သံသယနဲ့၊ ဆန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့ အခွင့်အရေးလိုချင်ရင် တာဝန်ယူမှု ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ပြောနိုင်သူဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အရင်ကလည်း မပေါ်ပေါက်ဖူးဘူး။ အခုလည်း မရှိဘူး။ နောင်လည်း ရှိမယ် မထင်လို့ပါဗျာ။
မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်တွေဟာ နှစ်တစ်ထောင်ကျော် မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မကြုံဘူးလောက်အောင် မိတ်ဆွေနည်းပါးမှု၊ စာနာမှု ခေါင်းပါးမှုကို နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း ယနေ့ကြုံတွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ သွေးချင်းတွေကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာ ကျနော်တို့မှာ အားနည်းချက်ရှိတယ်ထင်ရင် အပြန်အလှန်လေးစားမှု အခြေခံပြီး သွေးချင်းစိတ်နဲ့ ထောက်ပြကြစေချင်ပါတယ်။ ဧည့်သည်၊ အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတော့ မလုပ်ကြစေချင်ဘူး။ မလုပ်သင့်ဘူး။ လုပ်ခွင့် မရှိဘူး။
Posted: 26 May 2013 08:00 PM PDT
DATELINE: SECTION 52, PETALING JAYA, SELANGOR.
I WAS atapopular local pharmacy here last Thursday to see howawheelchair ramp could be built into the shop.
The Petaling Jaya City Council (MBPJ) had received several complaints from disabled residents wantingaramp to be built next to the pharmacy for easy accessibility.
So as Councillor for the area, I
Posted: 26 May 2013 08:24 PM PDT
"Kita mahu puluhan ribu laporan polis, paling kurang tentang dakwat kekal.
"Saudara, saya nak minta tiap orang yang mengundi yang hari pertama mengundi dakwat kekal dah pun hilang buat laporan polis.
"Selain itu, pengundi yang tidak dibenarkan mengundi kerana ada orang lain sudah mengundi menggunakan namanya juga kena buat laporan polis," ujar Anwar dalam ceramahnya di Kemuncak Perhimpunan Suara Rakyat 505 di Padang Timur AMcorp Mall di sini malam tadi.
Posted: 26 May 2013 05:09 PM PDT
In March 2013, video footage appeared of Dutch-speaking Islamist fighters active in Syria. Aboutahundred Dutch jihadists are said to have joined radical combat groups such as Jabhat al-Nusra, which they themselves refer to as 'an Islamic resistance army.' Their objective in travelling to Syria is to help "their brothers and sisters" in their struggle against the Assad regime. Among them are boys and girls in their twenties, especially but not exclusively from the cities of Delft, the Hague and Rotterdam. So far, at least two Dutchmen have been killed in Syria, the 21-year old Mourad and the 20-year old Soufian.
The jihadists are from various ethnic backgrounds – Moroccan, Turkish, Kurdish or other - but also include converts to Islam. One convert planning to travel to Syria told his story during an interview on Dutch television in March. The 26-year-old Rogier converted to Islam two years ago and quickly radicalized. Inarecording that he had prepared byaway ofafarewell message to his parents, he declared that he had answered Allah's call and had left in order to stand by the Muslims who are suppressed in Syria. In the interview, he explains that he "could not sit and watch his sisters in Syria being raped and his brothers being beheaded," convinced that it is his duty "to defend his brothers and sisters." Radical youth romanticize the battle in Syria but are likely to be disillusioned once they arrive, often having barely any knowledge of Arabic and lacking combat experience. The parents they leave behind have stated in interviews that they are extremely worried. One Belgian father personally travelled to Syria to find his 18-year-old son, contacting leaders of rebel groups inadesperate attempt to locate his child. Hat tip: Eye On The World